N'ihi na ọ dị ka ị na-anwa! | Martech Zone
N'ihi na ọ dị ka ị na-anwa!
Fraịde, Septemba 22, 2006 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Ee! Ee! Ee! N'ihi naanya dị ka ị na-agba mbọ ”, Seth dere. Otu ezigbo enyi m nwoke nke na-enweghị nzukọ ọmụmụ ihe obodo na nzukọ maka otu ọnọdụ dị mma ha na ha. Ejiri m mgbagha, rịọ, ma rịọ ya ka ọ yiri uwe. Ọ bụ ọnọdụ ebe uwe dabara adaba na n'ime ụgwọ ọnwa enyere. Agbalịrị m ihe niile…
“Anaghị m eme suut”, ọ na-ekwu.
"Ikwesiri!", Ka m kwuru.
"Ajụrụ m na ha kwuru na ha niile na-eyi jeans", ọ na-ekwu.
"Gịnị gịnị!?", M na-ekwu.
Ọ chịghị uwe.
Ugbu a enyere ya, o yikarịrị ka ọ ga-enweta onyinye ahụ. Enweghị m obi abụọ na ikike ya dị egwu ma ọ bụ ụdị ya, ụgbọala ya na nraranye ya. Enwere m mmetụta 'ụlọ akwụkwọ ochie' na-agwa ya ka ọ eyi uwe. Mụ na ya na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ ndị yi uwe na-adịghị mma. Ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị, Arụrụ m ọrụ maka ụlọ ọrụ ebe m na-atụba eriri na ụbọchị ọ bụla. Achọghị m ya… na-eme m ka m dị mkpa. Ọ mere, ekwesịrị m ikweta. 🙂
Enweghị m azịza dị mma maka ya mgbe m na-echegbu ya, mana ejiri m n'aka na uwe ga-eweta onyinye ka mma, nhọrọ ka mma, ihe ka mma! Ikekwe nanị nkwanye ùgwù ọzọ. Uwe bụ naanị itinye ego na onwe gị. Yiri uwe ahụ, nweta ego… tinye ya na ndị na-ehicha ihe ruo oge ọzọ. Kedu ihe ọdịda? Ọ dịghị onye na-achị nwa okorobịa ọchị. Ma ha nwere ike ịchị onye ahụ ọchị na jeans.
N'oge gara aga, emeela m mkpebi ịme ọ bụghị were ndị mmadụ n’ọrụ n’ihi ụdị ejiji ha na ịdị ọcha ha. Ọ bụ ihe nwute… mana m gafere ha n'agbanyeghị na ha nwere ezigbo onyinye. N'ihi gịnị? Agatụghị m eche banyere ya tupu mgbe ahụ, mana Seth kụrụ ya n'isi… ọ bụ n'ihi na ha abụghị agbalị. Nwoke ahụ (ma ọ bụ gal) na uwe ahụ bụ agbalị. Ha tinyere sọks mara mma, gbaa akpụkpọ ụkwụ ahụ, kee ya na Windsor ugboro atọ, tinye mkpọ olu ahụ… wee buru jaketị gbanyụọ ugboro atọ ka ọ ghara ịdapụ. Ihe mgbu! Ma ha mere ya. N'ihi gịnị? N'ihi na ha na-agbalị!
Nke ahụ ọ dị njọ? Ana m eme agadi?
Ọ dị m ka ya bụrụ na m gụọ ntinye a izu ole na ole gara aga ka m nwee ike ịza ya. Dị ka Seth na-ekwu maka Balloons Marketing na Ahịa Ahịa, akpaaka na-eme odika I na-anwa.
WordPress Kpọtụrụ withdị na Spam Nchedo
Sep 23, 2006 na 9: 44 AM
Ekwenyere m kpam kpam Doug. Aga m agbakwunye ịkpụ ntutu dị mma na akpụkpọ ụkwụ na-egbuke egbuke na ngwakọta. Nye m ma ọ bụrụ na onye ahụ achọghị ịma ka ọ dịrị m mma. Kedu ihe ga - eme ka ị chee na ọ ga - elebara anya maka ịrụ ọrụ ya nke ọma ma ọ bụ lekọta ụlọ ọrụ gị nke ọma. Ọ bụghị mgbe niile banyere ikike na ụbụrụ. Enwere ọtụtụ ndị nwere ọgụgụ isi. Ọ bụ ihe gbasara agụụ na ụgbọala.
Sep 25, 2006 na 3:58 PM
Kwekwara. M na-akpa nganga nke mgbe, mgbe yi a uwe (ịbụ ihe naanị otu onye na ngụsị akwụkwọ ụbọchị, aha dị ka ihe atụ). Ma kemgbe m malitere ụlọ ọrụ m, ma nwee ọtụtụ nzukọ ndị ahịa, amụtala m (ma ọ bụghị naanị ịnakwere) na ọ bụ ihe ezi uche dị na ejiji. Ọ bụ ụzọ isi ekwu na ị ji ihe ị na-eme kpọrọ ihe. Na ị na-asọpụrụ onye ahịa gị. Na ị na-eche banyere ihe ị na-eme.
Na nzukọ ndị ọzọ (ma ọ bụ, n'ọnọdụ nke enyi gị), ị nwere ike iyi uwe mgbe niile. Ma ọ dịghị mgbe ọzọ nkịtị na ị ahịa!